Hupenyu hunoshanda uye kusarara - Afrikhepri Fondation
SSekureva kweongororo yakaitwa munaNdira 2017, vangangoita 75% vevaBelgium vanoti vanotambura nekushaya hope. Ndeipi mhedzisiro yekurara kwakashata? Kuneta hongu, asi zvakare nehurombo kugona kuisa pfungwa, kusagadzikana kwemanzwiro, iyo tsika yekudyara uye kudya zvinotapira zvinhu, kuderera kwesimba, libido zvichingodaro ...
Asi nei kushaya hope uku? Pane zvinhu zvinoverengeka, asi kushaya hope kwakawanda kunokonzerwa nekushushikana, kushushikana uye kushushikana. Kushanda, hukama hwakaoma nevadikanwi, dambudziko razvino rehutano, kushungurudzwa kwezvikwiriso, kudya kwakashata, kumhanya-mhanya kwenzanga yevatengi kunotipedza pfungwa uye kunotitadzisa kurara zvakanaka.
Kurara sei kana iwe uine hypertensive nemabasa edu ezuva nezuva uye kuti isu tiri nguva yese mukutonga uye takasvinura? Uye ungaite sei kuti ubudirire mumabasa ako uye chengetedza hukama hwakanaka uye hune rugare nevadiwa, vaunoshanda navo nevamwe kana iwe wakaneta? Denderedzwa chairo rinotyisa.
Zvine musoro, mhinduro ndeyokuwana chiyero pakati pechiito nekuzorora. Asizve, pane kusaenzana pakati pezviito zvezviito, "kuita" uye nguva dzekuzorora, dzekumutsiridzwa, dzekuchaja mabhatiri, "ekusaita chinhu", zvakakosha zvakadaro.
Hypersensitive vanhu vari kunyanyisa kunetseka kune zvekunze zvinokonzeresa uye manzwiro anowanzo kuve akakosha kukanganiswa kwekurara nekuti kunyangwe ivo vaneta, vanowanzoita rumination uye huropi hwavo hauzokwanise kuzorora pavanorara.
Saka zvekuita? Iwe unofanirwa kubvuma kunonoka, kutora mabhureki mukati mezuva, kurerutsa purogiramu yako, kuramba kwete kune zvinokumbirwa nevamwe, kumisa masikirini kanenge awa rimwe usati warara, kudzivirira doro manheru. Funga nezve kugara kwako zvakanaka uye tora nguva yekudzidza maitirwo ekuzorora anoshanda chaizvo kana ukashandiswa nguva dzose kusunungura mhasuru dzakasimba uye kunyaradza pfungwa isina kugadzikana.
Hapana chinhu chiri nyore asi kurara kwakakosha kwakakosha kuyedza. Ini pachangu ndakatambura nekushaya hope uye kukanganiswa kwekurara kwemakore uye nebasa pandiri, tsika yekufema kufungisisa uye kuziva kurara yoga zvakandibatsira zvakanyanya mukuvandudza hope dzangu., Nenzira yezvakatipoteredza kana ndikangodaro, ndisina kurara mapiritsi .
Mushure mezvose, isu hatisi michina.
Info nezve http://yogadusoi.com
Ndibata ndibate musangano.
Zvinyorwa zvePiramid Energy
Mwari mumwe, zvitendero zvitatu (Vhidhiyo)